उपत्यकामा दैनिक चार हजारबढी संक्रमित भेटिने – Health Post Nepal
उपत्यकामा दैनिक चार हजारबढी संक्रमित भेटिने
२०७७ असोज २० गते १८:५६
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण दर उच्च गतिमा फैलिरहेको छ। मगंलबार देशभर एक हजार ५ सय ५१ जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा उपत्यकामा मात्रै एक हजार १७ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो।
देशभरका संक्रमितमध्ये यो संख्या ६५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा दुई साताभर संक्रमणको दर उच्च गतिमा फैलिने विज्ञहरूको दाबी रहेको छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे संक्रमण फैलिने दर उपत्यकामा उच्च रहेको दाबी गर्छन्।
‘हाल संक्रमणको दर एकदमै उच्च रहेको छ। संक्रमण दरलाई विश्लेषण गर्दा दुई साताभित्र काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो जोखिम पर्ने दखिन्छ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘उपत्यकामा मात्रै ४÷५ हजार संक्रमित भेटिन समय लाग्दैन।’
मगंलबार ११ हजार ४७ जनाको पिसिआर परीक्षण भयो। सो परीक्षणमा १४ प्रतिशतभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमण पुष्टि भएमा अवस्था एकदमै नराम्रो मानिन्छ।
हाल आइसोलेसन सेन्टरमा संक्रमित राख्नको लागि कुनै समस्या नभए पनि अस्पतालमा गम्भीर खालका बिरामीले उपचार नपाइरहेको गुनासो आइरहेको डा. पाण्डेले बताए।
‘आइसोलेसन सेन्टरमा बिरामी राख्नको लागि कुनै समस्या रहेको छैन। तर, अस्पतालका बेडमा अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर नपाइरहेको गुनासो सुनिरहेका छौ,’ डा. पाण्डेले भने।
हाल काठमाडौं उपत्यकाको आइसोलेसनमा सेन्टरमा संक्रमित पुर्‍याउने जिम्मेवारी इडिसिडिले लिएको छ। गम्भीर तथा उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको अस्पतालमा पुर्‍याउने समन्वयस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह—प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले संक्रमितको उपचारको लागि स्रोत—साधनको अपुग हुँदै गएको बताए। आजभोली उपत्यकामा अस्पतालको बिरामीको चाप बढ्दै गएको र व्यवस्थापनमा चुनौती आइरहेको डा. अधिकारीको भनाइ छ।
डा. अधिकारीकाअनुसार सरकारले आईसियू तथा भेन्टिलेटरमा जाने अवस्थालाई रोक्न बिरामीलाई जनर्रल बेडमा अक्सिजन दिएर राख्ने व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ।
संक्रिय संक्रमित २५ हजारभन्दा बढी भएमा स्वास्थ्य प्रणालीले नधान्ने डा. अधिकारीको दाबी रहेको छ। ‘हामीले पटक—पटक २५ हजारभन्दा बढी संक्रिय संक्रमित भएको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा दिन सक्दिैनौं भनिरहेका छौं,’ डा. अधिकारीले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यही अवस्थामा संक्रमण विस्तार हुँदा नियमित सेवाबाट मानिसहरू वञ्चित हुने निचिश्त छ।’
हाल नेपालमा संक्रमण केस विस्तारै घट्ने आकंलन गरिए पनि भारतमा संक्रमण दर बढेसँगै त्यसको प्रभाव पनि परेको देखिन्छ।
संक्रमण दर बढ्ेसँगै अब ६ महिनाको लागि त्यही अनुसारको व्यवस्थापनमा जुट्नपर्ने डा. पाण्डेको भनाइ छ।
‘कतिपय मानिसले कोरोनालाई रोग होइन भन्दै मास्क नलाई हिँडिरहेका छन्,’ डा. पाण्डेले भने, ‘मानिसहरूले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नअपनाउँदा यस्तो अवस्था आइपरेको छ।’
चाडपर्व नजिक आएको हुनाले संक्रमण गाउँ—गाउँमा फैलने चिन्ता थपिएको डा. पाण्डे बताउँछन्। ‘संक्रमण घर—घरमा पुग्दा झ्न भयावहक अवस्था आउँछ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘त्यसकारण सर्वसाधारण समयमा नै सचेत हुन आवश्यक छ।’
डा. अधिकारी संक्रमणको फैलिन रोक्नको लागि लकडाउन गर्नुपर्ने बताउँछन्।